【 ဆောငျးပါး 】 ''လူရိုးက သင်ျခြိုငျးမှာတဲ့လား'' | Opinion Leaders
【 ဆောငျးပါး 】 ''လူရိုးက သင်ျခြိုငျးမှာတဲ့လား''
သွျော …. မရိုးသားတဲ့လူတှကေ ရိုးသားမှုကို လိုခငျြတယျ။ကိုယျကသာ ကလိမျကကဈြ ကိုယျ့အပျေါကိုတော့ တခွားလူတှကေ ရိုးရိုးသားသားဆကျဆံမှ ကွိုကျကွတဲ့သဘော။မပွောမပွောခငျြတာမို့ မပွောမပွောတော့ဘူးရယျလို့ စိတျကဆုံးဖွတျထားပမေယျ့ လူငယျတှဆေီကို ကငျြ့ပကျြပိုးတှေ ကူးမှာစိုးတာမို့ ပွောဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ။
အလုပျရှငျအခြို့ ဝနျထမျးချေါတယျ။ရိုးသားကွိုးစားရမယျဆိုတဲ့အခကျြ ထညျ့ချေါတတျတာ တှရေ့တယျ။အဲဒီလိုချေါတဲ့ အလုပျရှငျတှထေဲမှာ တခြို့က သူတို့ကိုယျတိုငျ ရိုးသားလို့ ရိုးသားတဲ့သူကို အလိုရှိကွတာဖွဈပမေယျ့ တခြို့အလုပျရှငျတှကေတော့ သူတို့က အလုပျသမားအပျေါ ဂငျြး (ခငျြး) ထညျ့ရလှယျအောငျ ခိုငျးလို့လညျးကောငျးပွီး ရိုးတဲ့အတဲ့သူတှကေို အလိုရှိတာဖွဈပါတယျ။
ဂငျြး (ခငျြး) ထညျ့တယျဆိုတာက ဗနျးစကားအရ ပွောတာပါ။တကယျက ရိုးတဲ့ အတဲ့ အလုပျသမားတှဆေို လုပျအားခ၊ အလုပျခြိနျနဲ့ အခွား အလုပျသမား အခှငျ့အရေးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အလုပျရှငျက မရိုးမသား ကလိမျကကဈြလုပျလို့ လှယျတာကို ဂငျြး (ခငျြး) ထညျ့ရ လှယျတယျဆိုပွီး ခိုငျးနှိုငျးပွောဆိုခငျြတာ ဖွဈပါတယျ။တခြို့အလုပျရှငျတှဆေို သူတို့ မရိုးမသားလုပျသမြှ ခေါငျးခံဖို့ တပညျ့မှေးပွီး ထိုးကြှေးတာတှလေညျး ရှိပါတယျ။အလုပျသမားက ရိုးသားတော့ သူ့အလုပျရှငျက သူ့ကိုအားကိုးတယျပဲထငျပွီး အလုပျနဲ့မသကျဆိုငျတဲ့ သကှေငျးသကှေကျ ဘဝပကျြမယျ့ကိစ်စတှေ ခိုငျးလညျး ပြျောပြျောကွီးလုပျကွတာပေါ့။အဲဒါမြိုးတှေ မလုပျပေးတဲ့ အလုပျသမားတှေ လူငယျတှကေို မရိုးသားဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။
ရိုးသားတာ မရိုးသားတာထကျ အဲဒီလိုလူငယျတှကေ အတှေးအချေါနဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတ အားကောငျးတယျလို့ ပွောရမှာဖွဈပါတယျ။သူတို့တှကေ ရိုးတော့ရိုးသားတယျ မအတဲ့ သဘောပါ။အစောကပွောခဲ့တဲ့ လုပျငနျးရှငျတခြို့ အလိုရှိတဲ့ ရိုးသားတဲ့လူတှဆေိုတာက ရိုးသားတာအပွငျ အတှေးအချေါနဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတ အားနညျးသူတှဖွေဈပါတယျ။
တဈနညျးဆိုရငျ ရိုးတာကနေ အတဲ့ဘကျကို ရောကျနတေဲ့ လူမြိုးတှပေေါ့။
ဒီလိုပွောလို့ အလုပျရှငျအမြားစုက မရိုးသားဘူး မကောငျးဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။အလုပျရှငျတှထေဲမှာ ဝနျထမျးတှအေပျေါ ငဲ့ညှာပွီး မိသားစုဝငျတှလေိုပဲ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ ဆကျဆံစောငျ့ရှောကျတဲ့ အလုပျရှငျတှလေညျး အမြားကွီးပါ။
လူတခြို့ပွောလရှေိ့တဲ့ နောကျထပျစကားတခှနျး ရှိပါသေးတယျ။အခုခတျေမှာ လူရိုးကိုရှာခငျြ သင်ျခြိုငျးမှာသှားကွညျ့ အဲဒီမှာပဲရှိမယျတဲ့။အဲဒီစကားပွောတဲ့သူတှကေို ကွညျ့လိုကျရငျ သူတို့ကိုယျ၌က မရိုးသားခငျြကွတဲ့ ကလိမျကကဈြတှခေညျြးပဲဆိုတာ သှားတှရေ့တယျ။မကောငျးမမှုမှာ မှပြေ့ျောသူတှေ မြားလာတော့ အဲဒီမကောငျးမှုတှေ လုပျနတောကိုက ကောငျးမှုကိစ်စကို သရုပျဖျောနသေယောငျ ထငျယောငျထငျမှားဖွဈသှားစတောမို့ နောငျလာနောကျသား လူငယျတှအေတှကျ ရငျလေးစရာပါ။
ဥပမာဆိုပါစို့။ပစ်စညျးတဈခုရောငျးတော့မယျဆို စားသုံးသူ ထငျယောငျထငျမှားဖွဈအောငျ နဈနာအောငျ မရိုးမသား ပရိုမိုးရှငျးသဘော စှဲဆောငျပွီး အလုပျအောငျမွငျအောငျ လုပျနိုငျရငျကို သူတို့ဉာဏျကောငျးတာ၊ လုပျငနျးကြှမျးကငျြတာလို့ ထငျကွတယျ။အဲဒီလိုထငျအောငျလညျး အလုပျရှငျတခြို့က မွှောကျပေးပါတယျ။ဝနျထမျးတှကေ စားသုံးသူတှအေပျေါ မြားမြားလှညျ့ပတျပွီး တှဈလုပျနိုငျလေ သူတို့လုပျငနျးအောငျမွငျလေ ဖွဈမှာမို့ပါ။
အထူးသဖွငျ့ အတှေးအချေါ မရငျ့ကကျြတဲ့ လူငယျတှေ၊ ခတျေစကားနဲ့ပွောမယျဆိုရငျ ဉာဏျနညျးတဲ့ လူငယျတှအေတှကျ အဆိပျအတောကျတှပေေါ့။အခုခတျေ လူငယျတှထေဲမှာ တခြို့က ကိုယျခံအားနညျးတယျလို့ ပွောရမယျ။ကိုယျခံအားနညျးတယျဆိုလို့ ကနျြးမာရေးမကောငျးပဲ မကွာခဏဖြားတတျတာကို ပွောတယျမထငျပါနဲ့။ဦးနှောကျနဲ့ အသိဉာဏျ အကငျြ့စာရိတ်တပိုငျးမှာ ကိုယျခံအားနညျးတယျလို့ ပွောခငျြတာဖွဈပါတယျ။အဲဒီလိုလူငယျတှကေ ကြောသပျတာမခံနိုငျပါဘူး။ဘရိနျးဝကျရျှ (Brainwash) လုပျတာ မခံနိုငျပါဘူး။ဆိုလိုတာက အလုပျရှငျက ရာထူးနဲ့လစာ ကောငျးကောငျးပေးပွီး မဟုတျတာမမှနျတာ မရိုးမသားလုပျခိုငျးတာမှနျသမြှ လူငယျအခြို့က အကုနျလိုကျလုပျပါတယျ။
ဒါက ကြောသပျတာမခံနိုငျတဲ့ သဘောပါ။နောကျတဈခုက အလုပျရှငျနဲ့ အထကျလူကွီးက ကိုယျ့ခေါငျးထဲ ရိုကျသှငျးထားတဲ့ အယူအဆ သငျပေးသမြှ မွှောကျပေးသမြှတှကေို ဦးနှောကျက မဝဖေနျမပိုငျးခွားတော့ဘဲ အမှနျတရားထငျပွီး ဘုရားတဈဆူ ဂူတဈလုံးလို ကိုးကှယျကွ လိုကျလုပျကွတော့တာပါပဲ။ဒါက ဘရိနျးဝကျရျှ (Brainwash) လုပျတာ မခံနိုငျတဲ့သဘောပါ။
ကိုယျတှကွေုံ့တာကို ပွောပါမယျ။အလုပျအတူလုပျတဲ့ ညီငယျတဈယောကျ အကွောငျးပါ။လမျးစရိတျကို လိမျထုတျပါတယျ။ဒါမြိုးမလုပျဖို့နဲ့ ဒါကမရိုးသားတာလို့ ကိုယျကပွောတော့ လူတိုငျးလုပျနတောပဲတဲ့၊ ကိုယျမလုပျရငျ ကိုယျ့အခှငျ့အရေးဆုံးရှုံးမယျတဲ့။ဒီဘကျခတျေထဲ ဒါကို မရိုးသားတာလို့ မချေါဘူးတဲ့ လိမ်မာပါးနပျတာတဲ့၊ လူနပျခမျြးသာတဲ့ခတျေတဲ့။လူက မနပျရငျ မခမျြးသာဘူးတဲ့၊ သွျော သူအဲဒီလိုပွောခြိနျမှာ ဘေးမှာရှိတဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျ လူငယျတှကေလညျး ထောကျခံတယျ။ဒါအမှနျပဲတဲ့လေ။
နောကျထပျဖွဈရပျတဈခု။ အလုပျရှငျတဈယောကျက ဝနျထမျးအတှကျ အသကျအန်တရာယျရော၊ ဘဝပကျြနိုငျတဲ့အန်တရာယျပါရှိတဲ့ အလုပျတဈခုကို ခိုငျးပါတယျ။ခိုငျးရငျးနဲ့ အဲဒီဝနျထမျးရဲ့ အထကျက အုပျခြုပျသူကို ဝနျထမျးရှမှေ့ာတငျ မှာလိုကျတယျ။ဒီခရီး ဒီကိစ်စက အကုနျအကမြားမယျ့ခရီးတဲ့ စရိတျမြားမြားထညျ့ပေးလိုကျတဲ့၊ လိုရငျထပျတောငျးရငျ လိုသလောကျ ငှကေိုအမွနျလှဲပေးလိုကျတဲ့။အဲဒီဝနျထမျးက အရငျကတညျးက အတျောငှမေကျတဲ့သူဆိုတာ အလုပျရှငျက သူ့စရိုကျကိုသိပွီးသား။
ဒါကွောငျ့လညျး ဝနျထမျးတှအေမြားကွီး ရှိတဲ့အထဲကမှ ဒီလိုအန်တရာယျရှိတဲ့အလုပျကို ဒီဝနျထမျးကို ရှေးခိုငျးတာဖွဈပါတယျ။အဲဒီဝနျထမျးကလညျး ငှမေကျတာမို့ ငှလေိုသလောကျ စရိတျထုတျလို့ရတယျလညျးဆိုရော ဟနျတောငျမဆောငျနိုငျဘူး မကျြနှာကွီးကိုဖွီးလို့။ဒီဖွဈရပျပျေါမှာ ဘာတှေးမိလဲဆိုတော့ သူ့အရပျနဲ့ သူ့ဇာတျတော့လညျး ကိုကျသားပဲလို့ပေါ့။ဒီဖွဈစဉျမှာ အလုပျရှငျက သူလိုတာရဖို့ မရိုးသားတဲ့ဝနျထမျးကို ငှနေဲ့ပေါကျပွီး မရိုးသားတဲ့နညျးနဲ့ အသုံးခလြိုကျတာပါပဲ။
ဒီနရောမှာ လူငယျတှကေို ပွောလိုတာက ရပိုငျခှငျ့နဲ့ အခှငျ့အရေးဆိုတာကို ကှဲကှဲပွားပွား သိစခေငျြပါတယျ။ရပိုငျခှငျ့ဆိုတာ မဖွဈမနတေောငျးရမယျ့၊ ရရမယျ့ အရာပါ။အခှငျ့အရေးဆိုတာကတော့ အခွအေနအေခြိနျအခါပျေါ မူတညျပွီး ပျေါလာတတျတာ ဖွဈပါတယျ။ရပိုငျခှငျ့မဟုတျပါဘူး။ဒါကွောငျ့မို့ ရှေးစကားရှိပါတယျ။အခှငျ့အရေးဆိုတာ ရတိုငျးယူလို့မကောငျးဘူးတဲ့။ဘာလို့အဲဒီလိုပွောရတာလညျးဆိုတော့ ရပိုငျခှငျ့ရဲ့သဘောက ကိုယျကအရငျပေးပွီးတော့မှ ပွနျရတဲ့သဘောပါ။အခှငျ့အရေးဆိုတာက ကိုယျကအရငျယူပွီး နောကျမှပွနျပေးရတဲ့ သဘောပါ။ဒီတော့ ရပိုငျခှငျ့ကိုယူတာက လိပျပွာပိုသနျ့နိုငျသလို အနှောငျအဖှဲ့လညျး ကငျးပါတယျ။အခှငျ့အရေးယူတာကတော့ ကိုယျက အရငျယူထားတာဖွဈလို့ ကိုယျပွနျပေးရတဲ့အခါ အရငျးအပွငျ အတိုးပါပါရငျ ဘဝအတှကျ နှောငျကွိုးတှေ ကြေးဇူးခံ ကြေးဇူးစား သဘောတှေ ရဈပတျခညျြနှောငျလာနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ လူငယျတှအေနနေဲ့ ရပိုငျခှငျ့ကိုပဲယူပွီး အခှငျ့အရေးကိုတော့ ခငျြ့ခြိနျပွီးမှယူကွပါလို့ အကွံပွုလိုပါတယျ။လူငယျတှကေို ထပျပွီးအကွံပွုလိုတာက အလုပျပျေါမှာထားတဲ့ သဘောထားပါ။အလုပျကို ကွိုးစားတာထကျ စတေနာထားဖို့ ပိုအရေးကွီးပါတယျ။အလုပျပျေါမှာ စတေနာထားရငျ ရိုးသားမှုက အလိုလိုကပျပါလာပါတယျ။ရိုးသားမှုနောကျမှာ ကွိုးစားမှုက တဈပါတညျးယှဉျတှဲနတေတျတာမို့ လှညျ့ပတျကောကျကဈြခွငျးကငျးတဲ့ အောငျမွငျမှုကို မရှေးမနှောငျးခငျမှာတငျ ပိုငျဆိုငျလာနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီလိုမဟုတျဘဲ အလုပျပျေါမှာစတေနာမပါတဲ့ ကွိုးစားမှုသကျသကျက ပွဿနာရှိပါတယျ။အလုပျကောငျးဖို့ထကျ ကိုယျအောငျမွငျဖို့ကို ပိုပွီးဦးတညျတာမို့ အတ်တတှပေါလာပါမယျ။အတ်တတှပေါလာရငျ မရိုးသားနိုငျတော့ပါဘူး။ မရိုးသားတော့ဘူးဆိုရငျ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှအေပျေါ လှညျ့ဖွားပွိုငျဆိုငျတာ၊ တိုကျခိုကျခြောကျတှနျးတာ၊ မကောငျးကွံတာ၊ အလုပျအပျေါ အလှဲသုံးစားလုပျတာတှေ ရှိလာမှာဖွဈပါတယျ။အဲဒီအခါ ဥပဒအေရပါ အရေးယူခံရနိုငျတဲ့အထိ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ဝနျထမျးက အလှဲသုံးစားလုပျလို့ အရေးယူခံရတဲ့ ဖွဈစဉျတှလေညျး အမြားကွီးရှိခဲ့သလို ရှိနဆေဲလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီနရောမှာ အလဉျြးသငျ့လို့ လုပျငနျးခှငျဝငျမယျ့ လူငယျတှေ၊ လုပျငနျးခှငျထဲမှာရှိနတေဲ့ လူငယျတှနေဲ့ အရှယျမရှေး ဝနျထမျးအားလုံး သတိထားသငျ့တဲ့ ဥပဒပေုဒျမတခြို့ကို ပွနျလညျမြှဝပေေးခငျြပါတယျ။စာရေးကဖွဈဖွဈ အစခေံကဖွဈဖွဈ ရာဇဝတျမကငျးတဲ့ ယုံကွညျအပျနှံရေး ဖောကျဖကျြမှုကို ကြူးလှနျရငျ ရာဇသတျကွီး ဥပဒပေုဒျမ ၄၀၈ အရ အရေးယူခံရနိုငျပွီး ခုနဈနှဈအထိ ထောငျဒဏျတဈမြိုးမြိုး ခမြှတျရမယျ့အပွငျ ငှဒေဏျလညျး ခမြှတျနိုငျတယျဆိုပွီး ဥပဒကေ ဆိုပါတယျ။
အဲဒီလိုပဲ ပွညျသူ့ဝနျထမျးကဖွဈဖွဈ ဘဏျတိုကျစိုးကဖွဈဖွဈ ကုနျသညျကဖွဈဖွဈ ကိုယျစားလှယျကဖွဈဖွဈ ရာဇဝတျမကငျးတဲ့ ယုံကွညျအပျနှံရေး ဖောကျဖကျြမှုကို ကြူးလှနျရငျ ရာဇသတျကွီး ဥပဒပေုဒျမ ၄၀၉ အရ အရေးယူခံရနိုငျပွီး ထောငျဒဏျ နှဈနှဈဆယျဖွဈဖွဈ ဆယျနှဈအထိ ထောငျဒဏျတဈမြိုးမြိုးဖွဈဖွဈ ခမြှတျရမယျ့အပွငျ ငှဒေဏျလညျး ခမြှတျနိုငျတယျဆိုပွီး ဥပဒကေ ပွဌာနျးထားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ ဥပဒတေငျမက လူ့ကငျြ့ဝတျအရပါ တားမွဈထားတဲ့ မရိုးမသား အလှဲသုံးစားလုပျရပျတှကေို ရှုတျခတြဲ့အနနေဲ့ လူရိုးဆိုတာ သင်ျခြိုငျးမှာပဲရှိတာမဟုတျ၊ ကိုယျ့ကငျြ့တရား ခိုငျမာသူတှရေဲ့ ရငျထဲမှာလညျး ယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ ရိုးရိုးသားသား လူရိုးတှေ အမြားကွီးကိနျးအောငျးနပေါသေးတယျဆိုတာကို သကျသပွေလိုကျကွရအောငျလားဗြာ။
သြော် …. မရိုးသားတဲ့လူတွေက ရိုးသားမှုကို လိုချင်တယ်။ကိုယ်ကသာ ကလိမ်ကကျစ် ကိုယ့်အပေါ်ကိုတော့ တခြားလူတွေက ရိုးရိုးသားသားဆက်ဆံမှ ကြိုက်ကြတဲ့သဘော။မပြောမပြောချင်တာမို့ မပြောမပြောတော့ဘူးရယ်လို့ စိတ်ကဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် လူငယ်တွေဆီကို ကျင့်ပျက်ပိုးတွေ ကူးမှာစိုးတာမို့ ပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
အလုပ်ရှင်အချို့ ဝန်ထမ်းခေါ်တယ်။ရိုးသားကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အချက် ထည့်ခေါ်တတ်တာ တွေ့ရတယ်။အဲဒီလိုခေါ်တဲ့ အလုပ်ရှင်တွေထဲမှာ တချို့က သူတို့ကိုယ်တိုင် ရိုးသားလို့ ရိုးသားတဲ့သူကို အလိုရှိကြတာဖြစ်ပေမယ့် တချို့အလုပ်ရှင်တွေကတော့ သူတို့က အလုပ်သမားအပေါ် ဂျင်း (ချင်း) ထည့်ရလွယ်အောင် ခိုင်းလို့လည်းကောင်းပြီး ရိုးတဲ့အတဲ့သူတွေကို အလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျင်း (ချင်း) ထည့်တယ်ဆိုတာက ဗန်းစကားအရ ပြောတာပါ။တကယ်က ရိုးတဲ့ အတဲ့ အလုပ်သမားတွေဆို လုပ်အားခ၊ အလုပ်ချိန်နဲ့ အခြား အလုပ်သမား အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလုပ်ရှင်က မရိုးမသား ကလိမ်ကကျစ်လုပ်လို့ လွယ်တာကို ဂျင်း (ချင်း) ထည့်ရ လွယ်တယ်ဆိုပြီး ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။တချို့အလုပ်ရှင်တွေဆို သူတို့ မရိုးမသားလုပ်သမျှ ခေါင်းခံဖို့ တပည့်မွေးပြီး ထိုးကျွေးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။အလုပ်သမားက ရိုးသားတော့ သူ့အလုပ်ရှင်က သူ့ကိုအားကိုးတယ်ပဲထင်ပြီး အလုပ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ သေကွင်းသေကွက် ဘဝပျက်မယ့်ကိစ္စတွေ ခိုင်းလည်း ပျော်ပျော်ကြီးလုပ်ကြတာပေါ့။အဲဒါမျိုးတွေ မလုပ်ပေးတဲ့ အလုပ်သမားတွေ လူငယ်တွေကို မရိုးသားဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။
ရိုးသားတာ မရိုးသားတာထက် အဲဒီလိုလူငယ်တွေက အတွေးအခေါ်နဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတ အားကောင်းတယ်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေက ရိုးတော့ရိုးသားတယ် မအတဲ့ သဘောပါ။အစောကပြောခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တချို့ အလိုရှိတဲ့ ရိုးသားတဲ့လူတွေဆိုတာက ရိုးသားတာအပြင် အတွေးအခေါ်နဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတ အားနည်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နည်းဆိုရင် ရိုးတာကနေ အတဲ့ဘက်ကို ရောက်နေတဲ့ လူမျိုးတွေပေါ့။
ဒီလိုပြောလို့ အလုပ်ရှင်အများစုက မရိုးသားဘူး မကောင်းဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။အလုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် ငဲ့ညှာပြီး မိသားစုဝင်တွေလိုပဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံစောင့်ရှောက်တဲ့ အလုပ်ရှင်တွေလည်း အများကြီးပါ။
လူတချို့ပြောလေ့ရှိတဲ့ နောက်ထပ်စကားတခွန်း ရှိပါသေးတယ်။အခုခေတ်မှာ လူရိုးကိုရှာချင် သင်္ချိုင်းမှာသွားကြည့် အဲဒီမှာပဲရှိမယ်တဲ့။အဲဒီစကားပြောတဲ့သူတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သူတို့ကိုယ်၌က မရိုးသားချင်ကြတဲ့ ကလိမ်ကကျစ်တွေချည်းပဲဆိုတာ သွားတွေ့ရတယ်။မကောင်းမမှုမှာ မွေ့ပျော်သူတွေ များလာတော့ အဲဒီမကောင်းမှုတွေ လုပ်နေတာကိုက ကောင်းမှုကိစ္စကို သရုပ်ဖော်နေသယောင် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်သွားစေတာမို့ နောင်လာနောက်သား လူငယ်တွေအတွက် ရင်လေးစရာပါ။
ဥပမာဆိုပါစို့။ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းတော့မယ်ဆို စားသုံးသူ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် နစ်နာအောင် မရိုးမသား ပရိုမိုးရှင်းသဘော စွဲဆောင်ပြီး အလုပ်အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ရင်ကို သူတို့ဉာဏ်ကောင်းတာ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တာလို့ ထင်ကြတယ်။အဲဒီလိုထင်အောင်လည်း အလုပ်ရှင်တချို့က မြှောက်ပေးပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေက စားသုံးသူတွေအပေါ် များများလှည့်ပတ်ပြီး တွစ်လုပ်နိုင်လေ သူတို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်လေ ဖြစ်မှာမို့ပါ။
အထူးသဖြင့် အတွေးအခေါ် မရင့်ကျက်တဲ့ လူငယ်တွေ၊ ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် ဉာဏ်နည်းတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် အဆိပ်အတောက်တွေပေါ့။အခုခေတ် လူငယ်တွေထဲမှာ တချို့က ကိုယ်ခံအားနည်းတယ်လို့ ပြောရမယ်။ကိုယ်ခံအားနည်းတယ်ဆိုလို့ ကျန်းမာရေးမကောင်းပဲ မကြာခဏဖျားတတ်တာကို ပြောတယ်မထင်ပါနဲ့။ဦးနှောက်နဲ့ အသိဉာဏ် အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းမှာ ကိုယ်ခံအားနည်းတယ်လို့ ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလူငယ်တွေက ကျောသပ်တာမခံနိုင်ပါဘူး။ဘရိန်းဝက်ရှ် (Brainwash) လုပ်တာ မခံနိုင်ပါဘူး။ဆိုလိုတာက အလုပ်ရှင်က ရာထူးနဲ့လစာ ကောင်းကောင်းပေးပြီး မဟုတ်တာမမှန်တာ မရိုးမသားလုပ်ခိုင်းတာမှန်သမျှ လူငယ်အချို့က အကုန်လိုက်လုပ်ပါတယ်။
ဒါက ကျောသပ်တာမခံနိုင်တဲ့ သဘောပါ။နောက်တစ်ခုက အလုပ်ရှင်နဲ့ အထက်လူကြီးက ကိုယ့်ခေါင်းထဲ ရိုက်သွင်းထားတဲ့ အယူအဆ သင်ပေးသမျှ မြှောက်ပေးသမျှတွေကို ဦးနှောက်က မဝေဖန်မပိုင်းခြားတော့ဘဲ အမှန်တရားထင်ပြီး ဘုရားတစ်ဆူ ဂူတစ်လုံးလို ကိုးကွယ်ကြ လိုက်လုပ်ကြတော့တာပါပဲ။ဒါက ဘရိန်းဝက်ရှ် (Brainwash) လုပ်တာ မခံနိုင်တဲ့သဘောပါ။
ကိုယ်တွေ့ကြုံတာကို ပြောပါမယ်။အလုပ်အတူလုပ်တဲ့ ညီငယ်တစ်ယောက် အကြောင်းပါ။လမ်းစရိတ်ကို လိမ်ထုတ်ပါတယ်။ဒါမျိုးမလုပ်ဖို့နဲ့ ဒါကမရိုးသားတာလို့ ကိုယ်ကပြောတော့ လူတိုင်းလုပ်နေတာပဲတဲ့၊ ကိုယ်မလုပ်ရင် ကိုယ့်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမယ်တဲ့။ဒီဘက်ခေတ်ထဲ ဒါကို မရိုးသားတာလို့ မခေါ်ဘူးတဲ့ လိမ္မာပါးနပ်တာတဲ့၊ လူနပ်ချမ်းသာတဲ့ခေတ်တဲ့။လူက မနပ်ရင် မချမ်းသာဘူးတဲ့၊ သြော် သူအဲဒီလိုပြောချိန်မှာ ဘေးမှာရှိတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် လူငယ်တွေကလည်း ထောက်ခံတယ်။ဒါအမှန်ပဲတဲ့လေ။
နောက်ထပ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု။ အလုပ်ရှင်တစ်ယောက်က ဝန်ထမ်းအတွက် အသက်အန္တရာယ်ရော၊ ဘဝပျက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ပါရှိတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ခိုင်းပါတယ်။ခိုင်းရင်းနဲ့ အဲဒီဝန်ထမ်းရဲ့ အထက်က အုပ်ချုပ်သူကို ဝန်ထမ်းရှေ့မှာတင် မှာလိုက်တယ်။ဒီခရီး ဒီကိစ္စက အကုန်အကျများမယ့်ခရီးတဲ့ စရိတ်များများထည့်ပေးလိုက်တဲ့၊ လိုရင်ထပ်တောင်းရင် လိုသလောက် ငွေကိုအမြန်လွှဲပေးလိုက်တဲ့။အဲဒီဝန်ထမ်းက အရင်ကတည်းက အတော်ငွေမက်တဲ့သူဆိုတာ အလုပ်ရှင်က သူ့စရိုက်ကိုသိပြီးသား။
ဒါကြောင့်လည်း ဝန်ထမ်းတွေအများကြီး ရှိတဲ့အထဲကမှ ဒီလိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အလုပ်ကို ဒီဝန်ထမ်းကို ရွေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဝန်ထမ်းကလည်း ငွေမက်တာမို့ ငွေလိုသလောက် စရိတ်ထုတ်လို့ရတယ်လည်းဆိုရော ဟန်တောင်မဆောင်နိုင်ဘူး မျက်နှာကြီးကိုဖြီးလို့။ဒီဖြစ်ရပ်ပေါ်မှာ ဘာတွေးမိလဲဆိုတော့ သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်တော့လည်း ကိုက်သားပဲလို့ပေါ့။ဒီဖြစ်စဉ်မှာ အလုပ်ရှင်က သူလိုတာရဖို့ မရိုးသားတဲ့ဝန်ထမ်းကို ငွေနဲ့ပေါက်ပြီး မရိုးသားတဲ့နည်းနဲ့ အသုံးချလိုက်တာပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ လူငယ်တွေကို ပြောလိုတာက ရပိုင်ခွင့်နဲ့ အခွင့်အရေးဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြား သိစေချင်ပါတယ်။ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာ မဖြစ်မနေတောင်းရမယ့်၊ ရရမယ့် အရာပါ။အခွင့်အရေးဆိုတာကတော့ အခြေအနေအချိန်အခါပေါ် မူတည်ပြီး ပေါ်လာတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ရပိုင်ခွင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ ရှေးစကားရှိပါတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာ ရတိုင်းယူလို့မကောင်းဘူးတဲ့။ဘာလို့အဲဒီလိုပြောရတာလည်းဆိုတော့ ရပိုင်ခွင့်ရဲ့သဘောက ကိုယ်ကအရင်ပေးပြီးတော့မှ ပြန်ရတဲ့သဘောပါ။အခွင့်အရေးဆိုတာက ကိုယ်ကအရင်ယူပြီး နောက်မှပြန်ပေးရတဲ့ သဘောပါ။ဒီတော့ ရပိုင်ခွင့်ကိုယူတာက လိပ်ပြာပိုသန့်နိုင်သလို အနှောင်အဖွဲ့လည်း ကင်းပါတယ်။အခွင့်အရေးယူတာကတော့ ကိုယ်က အရင်ယူထားတာဖြစ်လို့ ကိုယ်ပြန်ပေးရတဲ့အခါ အရင်းအပြင် အတိုးပါပါရင် ဘဝအတွက် နှောင်ကြိုးတွေ ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစား သဘောတွေ ရစ်ပတ်ချည်နှောင်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ရပိုင်ခွင့်ကိုပဲယူပြီး အခွင့်အရေးကိုတော့ ချင့်ချိန်ပြီးမှယူကြပါလို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။လူငယ်တွေကို ထပ်ပြီးအကြံပြုလိုတာက အလုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့ သဘောထားပါ။အလုပ်ကို ကြိုးစားတာထက် စေတနာထားဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။အလုပ်ပေါ်မှာ စေတနာထားရင် ရိုးသားမှုက အလိုလိုကပ်ပါလာပါတယ်။ရိုးသားမှုနောက်မှာ ကြိုးစားမှုက တစ်ပါတည်းယှဉ်တွဲနေတတ်တာမို့ လှည့်ပတ်ကောက်ကျစ်ခြင်းကင်းတဲ့ အောင်မြင်မှုကို မရှေးမနှောင်းခင်မှာတင် ပိုင်ဆိုင်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အလုပ်ပေါ်မှာစေတနာမပါတဲ့ ကြိုးစားမှုသက်သက်က ပြဿနာရှိပါတယ်။အလုပ်ကောင်းဖို့ထက် ကိုယ်အောင်မြင်ဖို့ကို ပိုပြီးဦးတည်တာမို့ အတ္တတွေပါလာပါမယ်။အတ္တတွေပါလာရင် မရိုးသားနိုင်တော့ပါဘူး။ မရိုးသားတော့ဘူးဆိုရင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအပေါ် လှည့်ဖြားပြိုင်ဆိုင်တာ၊ တိုက်ခိုက်ချောက်တွန်းတာ၊ မကောင်းကြံတာ၊ အလုပ်အပေါ် အလွဲသုံးစားလုပ်တာတွေ ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအခါ ဥပဒေအရပါ အရေးယူခံရနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းက အလွဲသုံးစားလုပ်လို့ အရေးယူခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေလည်း အများကြီးရှိခဲ့သလို ရှိနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အလျဉ်းသင့်လို့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မယ့် လူငယ်တွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ အရွယ်မရွေး ဝန်ထမ်းအားလုံး သတိထားသင့်တဲ့ ဥပဒေပုဒ်မတချို့ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။စာရေးကဖြစ်ဖြစ် အစေခံကဖြစ်ဖြစ် ရာဇဝတ်မကင်းတဲ့ ယုံကြည်အပ်နှံရေး ဖောက်ဖျက်မှုကို ကျူးလွန်ရင် ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၈ အရ အရေးယူခံရနိုင်ပြီး ခုနစ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုး ချမှတ်ရမယ့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး ဥပဒေက ဆိုပါတယ်။
အဲဒီလိုပဲ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကဖြစ်ဖြစ် ဘဏ်တိုက်စိုးကဖြစ်ဖြစ် ကုန်သည်ကဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်စားလှယ်ကဖြစ်ဖြစ် ရာဇဝတ်မကင်းတဲ့ ယုံကြည်အပ်နှံရေး ဖောက်ဖျက်မှုကို ကျူးလွန်ရင် ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၉ အရ အရေးယူခံရနိုင်ပြီး ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ဆယ်ဖြစ်ဖြစ် ဆယ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်ဖြစ် ချမှတ်ရမယ့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး ဥပဒေက ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ဥပဒေတင်မက လူ့ကျင့်ဝတ်အရပါ တားမြစ်ထားတဲ့ မရိုးမသား အလွဲသုံးစားလုပ်ရပ်တွေကို ရှုတ်ချတဲ့အနေနဲ့ လူရိုးဆိုတာ သင်္ချိုင်းမှာပဲရှိတာမဟုတ်၊ ကိုယ့်ကျင့်တရား ခိုင်မာသူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာလည်း ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ရိုးရိုးသားသား လူရိုးတွေ အများကြီးကိန်းအောင်းနေပါသေးတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်ကြရအောင်လားဗျာ။